Ahụmahụ na-abịa n'ọtụtụ dị iche na nha. N'oge gara aga, ndị nchọpụta achọpụtawo na ọ na-enye aka ịhazi nyocha tinyere otu continuum n'etiti nyocha ụlọ na nyocha nke ubi . Otú ọ dị, ugbu a, ndị na-eme nchọpụta kwesịkwara ịhazi ndokwa tinyere usoro nke abụọ n'etiti nyocha nke analog na nchọpụta dijitalụ . Ebe a ga-enyere gị aka ịghọta ike na adịghị ike nke ụzọ dị iche iche ma mee ka akụkụ ndị kachasị mma (ọgụgụ 4.1) pụta ìhè.
Onyonyo 4.1: Atụmatụ nke ohere imepụta maka ịnweta. Na n'oge gara aga, nyocha dịgasị iche iche na mpaghara ntanye ụlọ. Ugbu a, ha na-adịgasị iche na nke analog-dijitalụ. A na-egosipụta ebe a na-emepụta ihe abụọ dị iche iche site na nyocha anọ m na-akọwa na isi nke a. N'uche m, ebe ohere kachasị mma bụ ule nyocha ala.
Otu akụkụ nke nyocha nwere ike ịhazi bụ ogige ụlọ ọrụ. Ọtụtụ nnyocha ndị dị na nkà mmụta sayensị bụ ihe nyocha ụlọ ebe ndị ụmụ akwụkwọ na-amụbaghị akwụkwọ na-arụ ọrụ dị iche iche na ụlọ nyocha maka ụgwọ ego. Ụdị nnwale a na-eme nnyocha na nkà mmụta uche n'ihi na ọ na-eme ka ndị na-eme nchọpụta nwee ike ịmepụta ntọala ndị a na-achịkwa nke ọma iji wepụ onwe ha ma nwalee ụfọdụ nkwekọrịta banyere omume mmadụ. Otú ọ dị, maka ụfọdụ nsogbu, ọ na-adị iche iche banyere ịchọta mkpebi siri ike banyere omume ụmụ mmadụ site na ndị dị otú ahụ na-adịghị ahụkebe ndị na-arụ ọrụ ndị dị otú ahụ dị iche iche na ọnọdụ dị otú ahụ na-adịghị ahụkebe. Nchegbu ndị a emeela ka e nwee ọganihu na nyocha . Ihe nyocha nke ubi na-ejikọta atụmatụ siri ike nke nchịkwa ndị na-ejikọtaghị ọnụ na ndị otu na-anọchite anya ndị otu na-arụ ọrụ ndị ọzọ na-eme na ntọala ndị ọzọ.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị na-eche banyere ụlọ nyocha na nyocha nke ubi dị ka ụzọ egwuregwu, ọ kacha mma ka ị chee na ha dị ka ndị kwadoro, nwere ike na adịghị ike. Dịka ọmụmaatụ, Correll, Benard, and Paik (2007) jiri nyocha ụlọ nyocha na nyocha nke nnwale iji chọpụta ebe "nkwụsị ịbụ nne." Na United States, ndị nne na-enweta obere ego karịa ụmụ nwanyị na-enweghị nwa, ọbụna mgbe eji nwanyi ndi nwere uzo di ka ndi na aru oru aka. E nwere otutu nkọwa maka usoro a, otu n'ime ha bụ na ndị ọrụ na-asọpụrụ ndị nne. (N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ dị ka nke a ọ bụ eziokwu nye ndị nna: ha na-achọkarị inweta ihe kariri ụmụ nwoke na-enweghị ụmụaka.) Iji chọpụta ihe ike megidere nne, Correll na ndị ọrụ ibe ya gbara mbọ abụọ: otu n'ime ụlọ na otu nọ n'ọhịa.
Nke mbụ, na nyocha ụlọ nyocha ha gwara ndị na-amụ ihe, bụ ndị na-agụghị akwụkwọ kọleji, na ụlọ ọrụ na-eduzi ọrụ maka onye na-eduga ngalaba ọhụrụ ahịa ahịa East Coast. A gwara ụmụ akwụkwọ ahụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ enyemaka ha na-akwụ ụgwọ, a gwara ha ka ha nyochaa nyochaa nke ọtụtụ ndị nwere ike ịme ihe na iji tụọ ndị ga-aga ime ọnụ ọgụgụ dị iche iche, dịka ọgụgụ isi, ọkụ, na itinye aka na-arụ ọrụ. Ọzọkwa, a jụrụ ụmụ akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ na ha ga-akwado ịnye onye na-achọ ọrụ na ihe ha ga-akwado dịka ụgwọ ọrụ. Otú ọ dị, ndị ụmụ akwụkwọ ahụ amaghị, e mere ka ha maliteghachi iji ya mee otu ihe ahụ ma e wezụga otu ihe: ụfọdụ n'ime ha na-egosi na nne (site na ntinye aka na nne na nna-nkuzi mkpakọrịta) ma ụfọdụ anaghị. Correll na ndị ọrụ ibe ya chọpụtara na ụmụ akwụkwọ ahụ na-enweghi ike ịkwado ịnye ndị nne na na ha nyere ha ụgwọ nkwụsị ala. Ọzọkwa, site na nyocha ndekọ banyere ma nyocha ma mkpebi ndị metụtara ụgwọ ọrụ, Correll na ndị ọrụ ibe ha chọpụtara na ọ bụ ihe ndị nne na - adịghị mma kọwapụtara n'ụzọ doro anya na ha dị ntakịrị na njedebe. Ya mere, nyocha nke ụlọ nyocha a nyere Correll na ndị ọrụ ibe ya aka ịtụle mmetụta na-akpata mmetụta ma nye nkọwa maka nkọwa ahụ.
N'ezie, onye nwere ike inwe obi abụọ banyere ịme nyocha banyere ụlọ ọrụ ahịa nile nke United States na-adabere na mkpebi nke narị ole na ole undergraduates bụ ndị eleghị anya ha enweghị ọrụ oge nile, ka ọ bụrụ naanị ka e were mmadụ n'ọrụ. Ya mere, Correll na ndị ọrụ ibe ha mekwara nchọpụta nchịkọta ọnụ. Ha zaghachiri ọtụtụ narị ụlọ ọrụ mgbasa ozi a na-akpọsa ngwá ahịa na akwụkwọ ozi agbagha na-amalite. Dị ka ihe ndị e gosipụtara na ndị na-agụghị akwụkwọ, ụfọdụ na-amaliteghachi ịmara nne na ụfọdụ adịghị. Correll na ndị ọrụ ibe ha chọpụtara na ndị nne na-enweghi ike ịkpọta ha maka ajụjụ ọnụ karịa ụmụ nwanyị na-enweghị ụmụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ezigbo ndị ọrụ na-eme mkpebi ndị dị mkpa na ọnọdụ nke ụwa mere dị ka ndị na-agụghị akwụkwọ. Hà mere mkpebi ndị yiri nke ahụ maka otu ihe kpatara ya? N'ụzọ dị mwute, anyị amaghị. Ndị na-eme nchọpụta enweghị ike ịjụ ndị were ha n'ọrụ ka ha kwuo ndị ha ga-eme ma ọ bụ kọwaa mkpebi ha.
Nyocha abụọ ndị a na-ekpughe ọtụtụ ihe gbasara ụlọ nyocha na nyocha n'ọhịa n'ozuzu. Nchọpụta ụlọ na-enye ndị na-eme nchọpụta nso-ịchịkwa njikwa nke gburugburu ebe ndị mmadụ na-eme mkpebi. Ya mere, dịka ọmụmaatụ, na nyocha ụlọ nyocha, Correll na ndị ọrụ ibe ha nwere ike ịhụ na a gụgharịrị mmalite ahụ na ọnọdụ dị jụụ; na ugbo ogwu, enweghi ike ighota ufodu n'ime nmalite. Ọzọkwa, n'ihi na ndị na-arụ ọrụ na nyocha na-achọpụta na a na-amụ ha, ndị na-eme nnyocha na-enwekarị ike ịnakọta data ndị ọzọ nwere ike inye aka kọwaa ihe mere ndị na-eso na-eme mkpebi ha. Dịka ọmụmaatụ, Correll na ndị ọrụ ibe ha gwara ndị na-abanye na nyocha ụlọ nyocha iji tụọ ọnụ ọgụgụ ndị na-aga ime dị iche iche. Ụdị usoro data a nwere ike inyere ndị na-eme nchọpụta aka ịghọta usoro ndị na-akpata esemokwu dị iche iche na otu ndị otu na-esi na-ebidoghachi.
N'aka nke ọzọ, ihe ndị a kpọmkwem bụ ndị m kọwapụtara dị ka uru bụ mgbe ụfọdụ a na-atụle adịghị ike. Ndị na-eme nchọpụta na-ahọrọ ọkachamara n'ọhịa na-ekwu na ndị na-arụ ọrụ nyocha ụlọ nwere ike ime nnọọ iche n'ihi na ha maara na a na-amụ ha. Dịka ọmụmaatụ, na nyocha ụlọ, ndị nwere ike ịkọwa ihe mgbaru ọsọ nke nchọpụta ahụ ma gbanwee omume ha ka ha wee ghara inwe mmasị. Ọzọkwa, ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-ahọrọ ọkachamara n'ubi nwere ike ịsị na obere esemokwu dị iche iche nwere ike ịpụta na ebe obibi dị ọcha, nke na-adịghị ahụkebe, ya mere nyocha ụlọ nyocha ga-eme ka mmetụta nke ịbụ nne na-eme mkpebi. N'ikpeazụ, ọtụtụ ndị na-akwado nyocha nke ubi na-akatọ nyocha ụlọ na-adabere na ndị na-agụ akwụkwọ WEIRD: tumadi ụmụ akwụkwọ si Western, Educated, Industrialized, Rich, na Democratic (Henrich, Heine, and Norenzayan 2010a) . Nleta nke Correll na ndị ọrụ ibe (2007) egosipụta njedebe abụọ dị na nchịkọta lab-lab. N'etiti ókè abụọ ndị a, e nwekwara ọtụtụ ngwakọ ngwakọ, gụnyere ịbịaru nso dị ka iwebata ndị na-abụghị ụmụ akwụkwọ na ụlọ nyocha ma ọ bụ na-abanye n'ọhịa ma ka na-enwe ndị na-arụ ọrụ rụrụ arụ.
Na mgbakwunye na ogige ụlọ ọrụ nke dị adị n'oge gara aga, afọ dijitalụ pụtara na ndị na-eme nnyocha nwere ugbu a akụkụ nke abụọ nke nyocha nwere ike ịdị iche: analog-dijitalụ. Dịka enwere nyocha nyocha dị ọcha, nyocha nke ubi dị ọcha, na ụdị dịgasị iche iche dị n'etiti, enwere nyocha dị ọcha analog, nyocha nke dijitalụ dị iche iche, na ụdị hybrids. Ọ bụ ihe ọjọọ ịkọwapụta nkọwa nke akụkụ a, ma nkọwa njirimara bara uru bụ na nyocha dijitalụ zuru ezu bụ nnwale ndị na-eji ngwá ọrụ dijitalụ mee ka ndị nabatara, na-emegharị ahụ, na-enye ọgwụgwọ, na nyochaa ihe. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta Restivo na nchọpụta nke van de Rijt (2012) nke barnstars na Wikipedia bụ nchọpụta dijitalụ zuru ezu n'ihi na ọ na-eji usoro dijitalụ maka usoro anọ a niile. N'otu aka ahụ, nnyocha zuru ezu nke analogụ ejirila ihe omimi dijitalụ mee ihe ọ bụla maka usoro anọ a. Ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-ahụ anya na nkà mmụta uche na-enwe nyocha nke analog. N'etiti ókè abụọ ndị a, e nwere nyocha nke dijitalụ nke na-eji nchịkọta analog na dijitalụ.
Mgbe ụfọdụ ndị na-eche banyere ịnwepụta dijitalụ, ha na-eche n'echiche ozugbo banyere ihe n'ịntanetị. Nke a bụ ihe nwute n'ihi na ohere ịnweta nyocha dịgasị iche iche abụghị nanị ntanetị. Ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịme ihe ngosi di iche iche nke dijitalụ site n'iji ngwaọrụ dijitalụ na ụwa nkịtị iji nweta ọgwụgwọ ma ọ bụ nyochaa ihe. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme nnyocha nwere ike iji smartphones iji zipu ọgwụgwọ ma ọ bụ ihe ntanetị n'ime ebe obibi ewuru iji tụọ ihe. N'ezie, dị ka anyị ga-ahụ mgbe e mesịrị na isi nke a, ndị nchọpụta ejiriworị ike mita ụlọ rụọ ọrụ iji chọpụta ihe ndị ha na-eme banyere ntinye ume nke gụnyere nde mmadụ 8.5 (Allcott 2015) . Ka ngwaọrụ dijitalụ na-abawanyewanye n'ime ndụ ndị mmadụ na ihe mmetụta dị iche iche na-abawanye n'ime ebe obibi e wuru, ohere ndị a iji mee ihe nyocha dijitalụ na ụwa nkịtị ga-abawanye ụba. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, nchọpụta ntanetị abụghị naanị nyocha n'ịntanetị.
Usoro ntanetị mepụta ọhụụ ọhụrụ maka ịnweta ebe niile tinyere nchịkọta ụlọ nyocha. Dịka ọmụmaatụ, na nyocha nyocha dị ọcha, ndị nchọpụta nwere ike iji usoro dijitalụ iji hụkwuo omume nke ndị na-eme ihe; otu ihe atụ nke ụdị ihe ndị a ka mma bụ ihe nlekota anya anya nke na-enye usoro na-aga n'ihu na-elegide ọnọdụ anya. Oge dijitalụ na-emekwa ka ohere nke nyocha na-arụ ọrụ-dị ka ịnwa na ntanetị. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-eme nchọpụta ejiriwo ngwa ngwa Amazon Mechanical Turk (MTurk) mee ka ndị na-eme ihe maka ntinye aka n'ịntanetị (nọmba 4.2). MTurk matches "ndị ọrụ" ndị nwere ọrụ ndị ọ dị mkpa iji wuchaa ya na "ndị ọrụ" ndị chọrọ ịrụcha ọrụ ndị ahụ maka ego. N'adịghị ka ahịa ahịa ndị omenala, Otú ọ dị, ọrụ ndị a na-achọkarị nanị minit ole na ole iji wuchaa, na mkparịta ụka dị n'etiti onye ọrụ na onye ọrụ bụ online. N'ihi na MTurk na-enyocha akụkụ nke nyocha ụlọ ọrụ ọdịnala-na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ iji mezue ọrụ ha na-agaghị eme maka nnwere onwe-ọ bụ ihe a na-emekarị maka ụfọdụ ụdị nyocha. N'ozuzu, MTurk kere usoro maka ijikwa ọdọ mmiri nke ndị na-eme ihe-ịchọta na ịkwụ ndị mmadụ ụgwọ-ndị na-eme nnyocha ejiriwo ihe ndị ahụ mee ihe iji banye n'ime mmiri nke ndị na-eso ụzọ.
Onyonyo 4.2: Akwụkwọ e bipụtara na iji data si Amazon Mechanical Turk (MTurk). MTurk na ụlọ ahịa ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ịntanetị na-enye ndị na-eme nnyocha ohere dị mfe iji mee ka ndị na-eme nchọpụta nweta ihe. E sitere na Bohannon (2016) .
Usoro ntanetị mepụtara ọbụna ohere ndị ọzọ maka nyocha nke ubi. Karịsịa, ha na-enyere ndị na-eme nchọpụta aka ijikọta nchịkwa na njikwa data nke ejikọtara ya na nyocha ụlọ na ọtụtụ ndị na-eme ihe dị iche iche na ihe mgbakwunye ndị ọzọ na-ejikọta na nyocha ụlọ. Tụkwasị na nke ahụ, nyochaa ugbo ala na-enyekwa ohere atọ na-esiri ike nyocha ndị analog.
Mbụ, ebe ọtụtụ nyocha analog na nyocha nke ubi nwere ọtụtụ narị ndị na-eso, nyocha nke ugbo nwere ike inwe ọtụtụ nde mmadụ. Mgbanwe a na-agbanwe n'ihi na ụfọdụ nyocha nwere ike ịmepụta data na efu efu. Nke ahụ bụ, ozugbo ndị nchọpụta kere ihe nnwale, ịnwekwu ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eme nchọpụta anaghị eme ka ọnụ ọgụgụ dị elu. Ịba ụba ọnụọgụgụ nke ndị sonyere site na otu narị ma ọ̄ bụ karịa abụghị nanị mgbanwe nhazi ; ọ bụ a qualitative mgbanwe, n'ihi na ọ na-enyere na-eme nnyocha na-amụta dị iche iche ihe si nwere (eg, heterogeneity ọgwụgwọ mmetụta) na na-agba ọsọ kpamkpam dị iche iche ibuo aghụghọ (eg, nnukwu-otu nwere). Isi ihe a dị oke mkpa, M ga-alaghachi na njedebe nke isi mgbe m nyere ndụmọdụ gbasara ịmepụta nyocha dị iche iche.
Nke abụọ, ebe ọtụtụ nyocha ọrụ analog na nyocha nke ubi na-emeso ndị na-eto eto dị ka ndị na-enweghị ike ịchọta wijetị, nyochaa ugbo ala na-ejikarị ozi ihe omumu gbasara ndị so na nhazi na nyocha nke nyocha. Ihe omuma a, nke a na-akpo omuma ihe omuma , na enwere ugbua n'ihe omuma di iche iche n'ihi na ha na-agba n'elu usoro nhazi oge niile (lee isi nke 2). Dịka ọmụmaatụ, otu onye na-eme nchọpụta na Facebook nwere ọtụtụ ihe gbasara ọgwụ ndị mmadụ na-ahụ maka ndị mmadụ na nchịkọta ihe omimi ya karịa onye na-eme nnyocha na mahadum nwere banyere ndị nọ n'ọhụụ analog ya. Usoro ọgwụgwọ a na-eme ka atụmatụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke ọma - dị ka igbochi (Higgins, Sävje, and Sekhon 2016) ma na-eche maka ịbanye ndị (Eckles, Kizilcec, and Bakshy 2016) - na nlezianya nyocha-dị ka ịkọwapụta nke heterogeneity nke ọgwụgwọ (Athey and Imbens 2016a) na mmezi mgbanwe maka nkenke ka mma (Bloniarz et al. 2016) .
Nke atọ, ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ analog na nyocha nke ubi na-agwọta ọgwụgwọ na nyochaa ihe dị n'ime oge dị mkpirikpi, ụfọdụ nchịkwa ugbo ala na-eme n'ogologo oge. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta Restivo na nchọpụta van de Rijt nwere ihe a rụpụtara kwa ụbọchị ruo ụbọchị 90, otu n'ime ihe ndị m ga-agwa gị maka nke a gasịrị na isi (Ferraro, Miranda, and Price 2011) mere ka ọ pụta na afọ atọ na enweghị isi ego. Ihe atọ ndị a nwere ike ịchọta, ihe gbasara ọgwụgwọ, na ọgwụgwọ ogologo oge na ihe nchoputa-na-abanyekarị mgbe a na-agba mbọ iji nyochaa ihe nyocha (lee isi nke 2 maka ịmatakwu usoro nhazi oge niile).
Ọ bụ ezie na ịnweta ihe omimi na-enye ọtụtụ ohere, ha na-ejikọta ụfọdụ adịghị ike na ụlọ nyocha analog na nyocha ugbo analog. Dịka ọmụmaatụ, enweghi ike iji nlezianya mụọ ihe gara aga, naanị ha nwere ike ịchọpụta mmetụta nke ọgwụgwọ ndị a pụrụ iji mee ihe. Ọzọkwa, ọ bụ ezie na ịnwepụta bụ ihe bara uru iji duzie iwu, nduzi zuru oke ha nwere ike inye dị ntakịrị n'ihi nsogbu ndị dịka ịdabere na gburugburu ebe obibi, nsogbu nnabata, na nha ngosipụta (Banerjee and Duflo 2009; Deaton 2010) . Ihe omimi nke ubi di iche iche na-eme ka nchekwube ndi mmadu meputara site na ihe omumu ubi-isiokwu m ga-eme ka o doo anya n'isiakwụkwọ a na isi 6.